Maalinta Aqoonta - Poltava Medical & ilkaha Academy
September 1, 2016, on munaasabadda Maalinta Aqoonta ee Palace ee xilli firaaqaha “November” shir iidda lagu of VDNZ Golaha Waxbarasho ee Ukraine “Yukreeniyaan Medical Academy Ilkaha”, taas oo sanadkan u dabaal-guuradii 95aad. Intii lagu guda jiray shirka weyn ee lagu qabtay furitaankii ardayda sano marka hore kuwaas oo si guul ah ku aflixin imtixaanka galo tartan oo ay noqoto xubnaha qoyska badan oo ah mid ka mid ah keentay hay'adaha waxbarashada sare ee Ukraine.
In dabaal ah waxaa ka qayb galay hoggaanka maamulka gobolka iyo kuwa maxalliga ah, sheekh, xubno ka tirsan maamulka, awood, waalidiinta iyo ardayda isu ardayda sanadka ugu horeeya.
Shirka Grand furay by ee Birmingham ee Academy ah, Sharafbadanyahay Doctor of Ukraine, MD, professor, academician of Ukraine Academy of Sciences Vyacheslav Nikolaevich Zhdan. Raktarka soo dhaweeyay ardayda cusub la ogolaado in madaxda sare ee ardayda Academy iyo dhakhaatiirta mustaqbalka u rajeeyay shaqo badan dhala, oo wax ku ool ah, horumarinta hoose-dhexe, inuu guulaysto meelaha cusub ee aqoonta iyo gaaro ujeedada la doonayo.
Salaamay jeestay martida noo Gacaliye: Dadka ku xigeenka of Ukraine, Saynisyahanka ee sharafta Ukraine Ischeykin ke, Duqa Poltava hooyadiis AF, Ku-xigeenka Agaasimaha Maamulka Caafimaadka gobolka Poltava Kurilko Yu, uu adaa kiniisaddu Filaret Henichesk Novokakhovskiy iyo kuwa si daacad ah ugu hambalyeeyay ardayda la hordhac ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee gobolka iyo Ukraine iyo muujiyeen kalsooni ah in inta badan ee ardayda cusub ee hadda ku biiro Academy iyo dhufasho guulaha ay dalkeena.
jawi sarreeyaha boqor ka hoolka lagu jiro dhawaaqidda dhaarta oo shir ardayda sanadka ugu horeeya-, taas oo keenta in tababar heer sare ah, dhaqanka wanaagsan iyo hawlaha bulsho firfircoon. Read dhaartii of sharaf ardayga xaq u VDNZU “MSA” siiyaa Porovay Olesya iyo Vladimir Ksonzu. Oo inta lagu jiro si wadajir ah “waxaan ku dhaaranayaa!” Ardayda ayaa markii ugu horeysay ku riday nolosha xirfadeed garbageliyaashii iyo koofiyado cad ay.
Sida laga soo xigtay Birmingham dhaqan of Academy ah, Professor VM Zhdan arday Freshman dhiibay sifooyin calaamad: furaha aqoonta iyo arday ID ee dalka.
Interesting sidoo kale waa macluumaad qaab dhismeedka filim, tacliimeed, ciyaaraha, guulaha farshaxanka ee jaamacadda, ah oo ku saabsan fursadaha iyo rajada u fiican oo laga furay ardayda cusub academy. Waqtigan xaadirka ah waxaa jiray shaki ku jirin in VDNZU “Yukreeniyaan Medical Academy Ilkaha” – hay'ad casri waxbarasho oo isku diyaarinaya aqoonta sare, xirfadlayaasha hal abuur leh, xirfadlayaasha dhabta ah.
Inta lagu guda jiro dabaal daqiiqo ee aamusnaan xusuustiisa ku dhacday kuwaas oo naftooda u siiyey ee madaxbanaanida iyo sharafta dalkeena.
Ekaan wadista fiidkii isku Dvornik A. iyo A. Lyevshyn oo ku hadlaya magaca ardayda oo dhan muujiyey sida ay uga mahad waalidiinta oo dhan ay daryeel, samir iyo jacaylka buu u ballaadhan yahay.
Ka qaybgalayaasha shirka ayaa soo dhaweeyay collectives hiwaayadda tahay dad Academy kaasoo soo bandhigay gabayo qurux badan oo qoob.